« Coup de poing »: tratra ireo roa lahy nilaza fa mpimasy - ewa.mg
« Coup de poing »: tratra ireo roa lahy nilaza fa mpimasy
News - « Coup de poing »: tratra ireo roa lahy nilaza fa mpimasy
Nandritra ny hetsika “Opération
coup de poing” nataon’ny Polisim-pirenena avy ao amin’ny CSPD
Tsiroanomandidy no nahatrarana lehilahy roa nilaza fa mpimasy. Ny
alahady teo, tratran’ny polisy teo amin’ny “barrage de sécurité” ao
Ambohitsoa, kaominina ambanivohitr’i Tsiroanomandidy, ry zalahy
ireto. Nosakanan’ireo polisy nanao sakana izy roa lahy ireto satria
nampiahiahy ny fihetsik’izy ireo. Nandritra ny fisavan’ny polisy,
basy vita gasy iray sy odigasy marobe ny tratra tany amin’izy roa
lahy. Nilaza izy ireo nandritra ny fanadihadian’ny polisy fa hoe
mpimasy sy mpamboly ny asan’izy roa lahy. Mbola mitohy ny
famotorana mahakasika ilay basy sy ny saika hampiasana ireto
fitaovam-piadiana ireto. Na eo aza izany, manao ezaka ihany koa ny
polisy amin’ny fanaraha-maso ny fepetra rehetra ara-pahasalamana
momba ny ady amin’ny fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 any
amin’iny faritra iny. Raha ny antontanisa nampitain’ny polisin’ny
CSPD Tsiroanomandidy, miisa 96 ireo nandalo fisavana ka ny telo
amin’ireo, nanaovana fanadihadiana manokana. Miisa valo ireo fiara
kely nosavaina raha miisa 19 kosa ireo kamiaobe. Taksiborosy miisa
22 sy moto miisa 13 nandalo fisavana (roa amin’ireo ny tsy nanao
arolaha ka voasazy avy hatrany). Teo ihany koa ireo olona tsy
nandalo fisavana kara-panondro miisa 79 raha mpitondra posiposy
miisa 10 nomena fampitandremana.
L’article « Coup de poing »: tratra ireo roa lahy nilaza fa mpimasy a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – Mondial 2022 : maraina hatramin’ ny hariva ny oran’ireo lalao sasany
Araka izay efa nampahafantarina teto, ny 21 novambra ka hatramin’ny 18 de­sambra, ny taona 2022 no ha­natontosana ny fiadiana ny amboara eran-tany “Mon­dial”, taranja baolina kitra. Ndeha kosa ho fantarina ireo ora hizoran’ny lalao isanisany. Hampiantrano ny andiany faha-22, amin’ny fiadiana ny amboara eran-tany, taranja baolina kitra i Quatar, amin’ny taona 2022. Fihaonana hatao ny 21 novambra ka hatramin’ny 18 desambra. Hiady izay ho lohany amin’izany ireo firenena miisa 32 tafakatra tamin’ny fifanintsanana isaky ny kaontinanta. Miisa 64 ireo fihaonana tanterahina amin’izany. Raha ny fandaharam-potoana, ny 21 no­vambra ka hatramin’ny 2 de­sambra ny lalaom-bondrona ka hisy efatra ny ora hanaovana izany, ny amin’ny 11 ora an­toandro, ny amin’ny 2 ora folakandro, ny amin’ny 5 ora hariva ary amin’ny 8 ora alina. Mari­hina fa mitovy ny ora eto Mada­ga­sikara sy ny any Quatar. Hotanterahina ny 3 ka hatramin’ny 6 desambra kosa ny dingana ampahavalon-dalana ho an’ireo ekipa 16 tafita.Noho ny hafanana midanika any QatarMiato kely ny fihaonana, ny 7 sy ny 8 desambra, ho an’ireo firenena valo tafakatra amin’ny ampahefa-dalana. Ny 9 desambra, ny fanombohan’ny lalao roa ka amin’ny 4 ora hariva ny fi­haonana voalohany raha amin’ny 6 ora kosa ny faharoa. Hitohy ny 10 desambra izany, tsy miova ny ora hanaovana ireo lalao roa sisa. Miala sasatra indray ireo ekipa efatra nahazo ny tapakila hiakarana amin’ny ma­nasa-dalana, ny 11 sy ny 12 desambra. Ny 13 desambra ny ankatoky ny famaranana voalohany ary ny 14 desambra ny lalao faharoa. Samy hotontosaina amin’ny 8 ora alina avokoa ireo fihaonana roa ireo. Hatao ny 18 desambra, manomboka amin’ny 4 ora tolakandro ny famaranana ho an’ny “Mondial 2022”. Tsia­hi­vina fa tsy azo tanterahina ny volana jona sy jolay, toy ny mahazatra ny fihaonana tamin’ity noho ny hafanana midanika misy any an-toerana, amin’io vanim-potoana io.TompondakaL’article Kitra – Mondial 2022 : maraina hatramin’ ny hariva ny oran’ireo lalao sasany a été récupéré chez Newsmada.
Fiaraha-miasa amin’ny Onudi: apetraka eny amin’ny CSB ny fandoroana fako
Miara-miasa ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka sy ny Onudi amin’ny fifehezana ny fako eny amin’ny tobim-pahasalamana. Hapetraka eny amin’ny CSB sy ny hopitaly ny fitaovana manaraka ny teknolojia moderina ahafahana mandoro ireo karazana fako sy ny fitaovana avy nampiasaina eny amin’ireny toerana ireny.Hisy ihany koa ny fampiofanana ireo mpiasan’ny fahasalamana sy ireo mpanadio eny amin’ny tobim-pahasalamana amin’ny fampiasana izany fitaovana izany mba ho tena mahomby.Tanjona ny tsy hiparitahan’ny fako mety hitera-doza ho an’ny manodidina. Nitombo ny fako teny amin’ireny hopitaly sy ny CSB ireny nandritra ny fotoana nampirongatra ny valanaretina Covid-19.Mila misolo matetika ny aron’akanjon’ny mpitsabo sy ireo mpiasan’ny fahasalamana ary betsaka ihany koa ny fitaovana niasa noho ny fahamaroan’ny marary. Mila fehezina ireny fako ireny mba tsy ho loza mitatao ho an’ny hafa.Tatiana AL’article Fiaraha-miasa amin’ny Onudi: apetraka eny amin’ny CSB ny fandoroana fako a été récupéré chez Newsmada.
Mpandeha bisikiketa iray maty tsy tra-drano teny By-Pass, omaly hariva. Voafaokan’ny fiara 4×4 iray izy ka nianjera niaraka tamin’ny akoho marobe nentiny. Hatreto, tsy fantatra na namonjy ilay niharam-boina ilay fiara nandona na tsia. Nanaovana antso avo kosa ilay lehilahy namoy ny ainy. Misy ireo milaza fa fiara « plaque rouge » ny nandona ilay mpitondra bisikileta.Tra-tehaky ny polisy ao Toamasina ny lehilahy iray malaza amin’ny halatra moto ao an-toerana. Voasambotra tao an-tranony ao Ankirihiry izy ny alarobia teo tokony ho tamin’ny 5 ora maraina. Nambaran’ny polisy ao Toamasina fa malaza ratsy koa amin’ny famakiana fiara koa ralehilahy. Loharanom-baovao marim-pototra ny nanoro azy ny mpitandro filaminana. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Tsy mbola hita i Moussa hatramin’izao. Tovolahy voapanga ho namono nahafaty an’i Adrianna, zazavavikely vao 9 taona tao Mahajanga, volana vitsy lasa izay. Efa nisy ny fikarohana azy io tany Marovoay, toerana misy ny fianakaviany, saingy tsy nahitam-bokatra izany hatramin’izao. Ankehitriny, mitohy any avaratry ny Nosy ny fitadiavana an’i Moussa ka miapaka hatrany Nosy Be sy Diana izany, hoy ny fanazavan’ny loharanom-baovao iray. Tsy mahazo mivoaka ny faritan’i Mahajanga kosa ny vadin’i Moussa, taorian’ny fanadihadiana azy.Tsy mbola nivoaka ny fonjan’i Toliara ilay teratany soisy tratra nanao firaisana ara-nofo tamina tovovavikely 14 taona. Niakatra fampanoavana ny herinandro teo ny raharaha ary voatazona vonjimaika ao am-ponja ny tenany. Tsihivina fa tratran’ny polisy ambodiomby teo am-panaovana firaisana ara-nofo tamina ankizivavy tao anaty trano fivahinianana ralehilahy. Mbola maro koa anefa ireo ankizivavy niandry azy tamin’izany. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Minisitra Razafimahefa – Fitaovan’ny CCO: « Tsy nisy volam-panjakana nivoaka fa fanomezan’ny Pnud… »
Nitondra fanazavana manoloana ny resabe niainga tany amin’ny tambajotra sosialy ny filohan’ny CCO sady minisitry ny Atitany, Razafimahefa Tianarivelo. « Fanomezana avy amin’ny Pnud ireo fitaovana ireo. Tsy nandray vola ny CCO ary tsy nisy volam-panjakana nivoaka », hoy izy tetsy Tsimbazaza, omaly. Mazava izany ny valin-kafatra manoloana ireo tsaho samihafa momba azy. Nohitsiny fa tafiditry ny resaka politika ny raharaha ary tsy vao voalohany izany, manoloana ity antontan-taratasy nivoaka tamin’ny « facebook » ity. « Tena fanapotehana ankitsirano sy fanenjahana ahy manokana izao… Tsy misy resaka tolo-bidy na tsenambaro-panjakana izany », hoy ihany izy. Nanteriny fa voahaja avokoa ireo dingana samihafa sy ny fanarahana ny fenitra iraisam-pirenena amin’ny fanomezana avy amin’ny mpiara-miombona antoka tahaka izao. Namaly izany mason-tsivana sy fepetra izany ny orinasa, iasan’ny vadiny, tahaka ny mpiasa tsotra rehetra ihany. « Ho hita eo ny ho tohiny… Ny fampandrosoana ny firenena izao no zava-dehibe atrehina », hoy ihany izy.Synèse R. L’article Minisitra Razafimahefa – Fitaovan’ny CCO: « Tsy nisy volam-panjakana nivoaka fa fanomezan’ny Pnud… » a été récupéré chez Newsmada.
Fanavaozana mpitantana :: Hosoloina ny talen’ ny Ivon-toeran’ny sarimihetsika malagasy
Hanavao ny mpitantana ny ivon-toeran’ny sarimihetsika sy sarimiaina malagasy (ISSM) ny minisiteran’ ny Kolontsaina sy serasera. Namoaka antso fahalinana tao anaty tambajotran- tserasera sosialy “Facebook” izy ireo, omaly. Misokatra ho an’ny olon-drehetra tsy ankanavaka, indrindra ireo andriambavilanitra, ny toerana. Horaisina hatramin’ny 30 septambra ny antontan-taratasy fisoratana anarana hita na io andraikitra io. Efa am-bolana maro no nanendrena ny tale misahana ny ivon-toerana saingy tsy nisy fampitam- baovao momba ny asa nosahanin’izy ireo. Nambaran’ny tale jeneralin’ ny kolontsaina fa “nametrapialana noho ny antony ara-pianakaviana ity tompon’andraikitra ity”. “Natao ilay antso mba hahafahana manolo ny toerana banga sy mandroso eo amin’ny asa marobe, izay tsy maintsy sahanina ho fampiroboroboana ny tontolon’ny sarimihetsika sy ny sarimiaina malagasy”, hoy izy. Hisahana an’ireo mpikirakira sarimihetsika malagasy iray manontolo eto Madagasikara mifanaraka amin’ireo lalàna amin’ny vokatra manerana izao tontolo izao io sampana io. L’article Fanavaozana mpitantana :: Hosoloina ny talen’ ny Ivon-toeran’ny sarimihetsika malagasy est apparu en premier sur AoRaha.
Niveri-maina ireo Polisy misahana ny lozam-pifamoivoizana tonga hanao fizahana ny fiara iray tra-doza teny Ambohimiandra, afak’omaly alina. Voalaza fa naratra mafy tamin’io loza io ny mpamily, rehefa nidona tamin’ny andrin-jiro ny fiara. Vakim-pitaratra anefa sisa no hitan’ireo polisy teny an-toerana, minitra vitsy taorian’ny loza. L’article Fanjavonana fiara est apparu en premier sur AoRaha.